Woman sues ex-fiance after being impaled on fence while urinating from his veranda
ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော်ခက်တဲ့ ပြဿနာ....
သြစတေးလျနိုင်ငံသူအမျိူးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမနှင့်စေ့ စပ်ထားသည့်အမျိူးသား၏နေအိမ်မှ အကာအရံမ
တပ်ဆင်ထားသည့် ၀ရံတာတွင် အပေါ့ သွားစဉ်ပြုတ်ကျခဲ့ ပြီး ခြံစည်းရုံးဆူးချွန်များဆူးပြီး ဒါဏ်ရာအများအ
ပြားရရှိခဲ့ လို့ ထိုအမျိူးသားအား တရားစွဲဆိုခဲ့ ပါတယ်...
တရား၇ုံသို့ တင်သွင်းသည့် စွဲဆိုချက်တွင် တောင်ဘယ်လာရက်ရပ်ကွက်မှ မစ္စမီရှဲလ်အက်ဂဲလ်စတုံး က အခင်းဖြစ်ပွားသည့် စမစ်သီစမ်းချောင်းအရပ်မှ နေအိမ်၏၀ရံတာမှာ အကာအရံမရှိပဲတည်ဆောက်ထားခဲ့ 
လို့ သူမအနေနှင့် အောက်ဖက်ရှိခြံဆီးရိုးဆူးချွန်များပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ ရကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်...
အသက် ၃၅ ရှိ မစ္စအက်ဂဲလ်စတုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း၊ အညစ်အကြေးစွန့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ဆူး
၀င်နစ်မြုပ်သည့် ဒါဏ်ရာများရရှိခဲ့ သဖြင့် ကျောက်ကပ်ပြုပြင်ခွဲစိတ်ကုသရခြင်း၊ ကျောက်ကပ်အောက်ပိုင်းမှ
အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရခြင်း၊ အူမကြီးဖြတ်တောက်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ ရတယ်လို့ ဖော်
တရားလိုဟာ ထိုအိမ်ခြံဝန်းအတွင်းမှာပင် အပေါ့ သွားစဉ် အလင်းရောင်လုံလောက်စွာလည်းမီးမထွန်းထား
သည့် ဝရန်ဒါမှ ပြုတ်ကျကာ ဒါဏ်ရာရှိခဲ့ ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟု ထိုဖော်ပြချက်ကဆိုပါတယ်....
အန္တရယ်လွယ်မထားနိုင်လို့ ...အကြောင်းမညီညွတ်ကာ ဘောင်းဘီချွတ်ရမယ်ဆိုယင်လည်း...
ဘေးဘယ်ညာ ကြည့်ကာသွားပါလို့ ....သတိသာထားပါတော့နှမငယ်...
သူမဟာ စေ့စပ်ထားခဲ့ သူ လက်စလီဖန်းနက်စ်အား အဆောက်အဦလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် 
မလျော်ညီသည့် ( မလိုက်နာသည့် ) ၀ရံတာအားထားရှိခဲ့ သည့် အပြင် ခြံစည်းရိုးဆူးများကိုလည်း မတော်
တစ်ဆထိမိခိုက်မိသူများအား ကာကွယ်နိုင်၇န် အဖုံးအကာများမတပ်ဆင်ထားခဲ့ မှုများဖြင့် တ၇ားစွဲဆိုခဲ့ ပါ
မစ္စတာဖန်းနက်စ် ဟာထိုအိမ်ခြံမြေ၊အဆောက်အဦ၇ဲ့ ပိုင်၇ှင်ဖြစ်လို့ သူမရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရေးကိုဂရုစိုက်ပြုမူဖို့ 
တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
သူမရဲ့ တင်ပါးဆုံနှင့်ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်း ( ခါးအောက်ပိုင်း ) ဒါဏ်ရာများကြောင့် အမာရွတ်များကျန်ရှိခဲ့ ရ
ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်သောကရောက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရခြင်းများနှင့် အိပ်မက်
ဆိုးများဆက်ကာမက်ရခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
အပေါ့ သွားစဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ ရသည့် မတော်တစ်ဆပြုတ်ကျမှုကြောင့် ရသည့် ဒါဏ်ရာများဟာ တ၇ားခံအနေ
နှင့် သတိထားဆင်ခြင်၊ ဆောင်ရွက်ခဲ့ လျှင်ရှောင်ရှားနိုင်သည့်အန္တ၇ယ်ဖြစ်ပါတယ် လို့ သူမရဲ့ ကြေငြာချက်
မှာ အခိုင်အမာဆိုထားခဲ့ ပါတယ်....
တရားခံဘက်မှာတော့ မည်သို့ မျှဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး....
An Australian woman who impaled herself onapicket fence when she fell while urinating from an unprotected veranda has sued her former fiance for substantial damages. InaSupreme Court writ, Michelle Egglestone of South Ballarat claims that the veranda at the house in Smythes Creek was constructed without any or with inadequate ballustrading and this caused her to fallasmall distance to the star picket fence below.
Ms Egglestone, 35, sustained "penetrative injuries to the rectum, vagina and bladder necessitating surgical treatment involving laparotomy, repair of the bladder, repair of the vault of the vagina and colostomy'', according to her statement of claim. "The plaintiff sustained injury at the premises whilst she was urinating from the veranda which was inadequately lit,'' it says.
She had sued Leslie Furness, saying that he failed to ensure the veranda complied with the building codes, failed to ensure the star pickets underneath had protective capping to minimise the risk of anyone "coming into contact with them''. She said Mr Furness was the owner and occupier of the house and owed heraduty of care.
Ms Furness said the pelvic and lower abdominal injuries left her with scarring, depression and anxiety and post traumatic stress disorder and nightmares. Her statement of claim says that her injuries while urinating were "a danger which could have been avoided with reasonable care on behalf of the defendant''. No defence has yet been filed.
Posted by peter kyaw | at 11:35 AM |
Labels: news: news.com.au